Atoyerɛnkyɛm Si a, Yehowa Adansefo Boa Nkurɔfo Anaa? | NNB
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bislama Bosnian Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Digor Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Latvian Lingala Lithuanian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mazatec (Huautla) Mende Mingrelian Mixe (North Central) Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Soli Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swati Swedish Sãotomense Tagalog Tahitian Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tsonga Tswana Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Aane, atoyerɛnkyɛm si a, Yehowa Adansefo boa nkurɔfo. Yɛde asɛm a ɛwɔ Galatifo 6:​10 no yɛ adwuma. Ɛhɔ ka sɛ: “Momma yɛnyɛ nnipa nyinaa yiye, ne titiriw no wɔn a yɛne wɔn bɔ abusua wɔ gyidi mu no.” Ɛno nti yɛde nneɛma a nkurɔfo hia kɔma yɛn nuanom Adansefo ne wɔn a wɔnyɛ Adansefo nyinaa. Sɛ atoyerɛnkyɛm si saa a, nkurɔfo hia awerɛkyekye paa, enti yɛkyekye wɔn werɛ ka Onyankopɔn asɛm kyerɛ wɔn.​—2 Korintofo 1:​3, 4.
Sɛ atoyerɛnkyɛm si a, asafo mu mpanyimfo a wɔwɔ baabi a esii no frɛfrɛ wɔn asafo mufo hwɛ sɛnea obiara ho te, na sɛ obi hia mmoa bi a wɔde ama no. Sɛ mpanyimfo no hwɛ tebea no na wɔyɛ nea wobetumi de boa ntɛm saa a, afei wɔbɔ Yehowa Adansefo ɔfese a ɛwɔ ɔman no mu amanneɛ.
Sɛ mmoa a ehia no boro asafo no ahoɔden so a, Yehowa Adansefo Akwankyerɛ Kuw no yɛ ntotoe ma yɛde nneɛma a ɛho hia no kɔboa. Saa na Kristofo a wɔtenaa ase tete no boaa wɔn nuanom bere a ɔkɔm sii no. (1 Korintofo 16:​1-4) Yehowa Adansefo ɔfese a ɛwɔ ɔman no mu tew Atoyerɛnkyɛm Bere Mu Aboafo Kuw ma wɔhwɛ toto nneɛma. Adansefo a wɔwɔ aman foforo so de wɔn nneɛma bɛboa, na afoforo nso tu wɔn ho si hɔ de wɔn bere ne wɔn ahoɔden boa.​—Mmebusɛm 17:17.
Ntoboa a yɛde kɔ Yehowa Adansefo ɔfese no, ɛno bi na yɛde boa nnipa a atoyerɛnkyɛm ama wɔn ho akam no. (Asomafo Nnwuma 11:​27-30; 2 Korintofo 8:​13-15) Nnipa a wotu wɔn ho ma yɛ adwuma no, yentua wɔn ka, enti sika a yebeyi sɛ yɛde rekɔboa nkurɔfo a atoyerɛnkyɛm adi wɔn nya no, ebi mfa baabiara. Yɛhwɛ ntoboa no yiye paa.​—2 Korintofo 8:20.
Aman bebree so no, Yehowa Adansefo boa nnipa a wɔkɔ ahohia mu.
Share Share Atoyerɛnkyɛm Si a, Moboa Nkurɔfo Anaa?